Android 6.0 Marshmallow ကိုပုဆိန်သုံးပုဒ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် Androidsis
မနေ့ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့ Google event မှာ Android 6.0 Marshmallow အကြောင်းစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်ကစတင်ခြင်း၏နည်းလမ်းသစ်ကြောင့်၎င်းင်း၏အနီးအနားပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ကြပြီ developer များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော preamps Google M. / O တွင် Android M. အဖြစ်ပေါ်လာသည်
အရင် version သုံးခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ version အသစ်မှာသတင်းတစ်ခုစီကိုပေးခဲ့တာပါ။ တိုတိုပြောရရင် Android 5.0 Lollipop နဲ့ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကိုမြှင့်တင်ဖို့ပါ။ မနေ့ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ Google ကလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ လျင်မြန်စွာပြန်လည်သုံးသပ် Marshmallow ကိုလက်ခံမည့်ထိုဆိပ်ကမ်းများသည်နောက်အပတ်များနှင့်လများကြာလိမ့်မည်။
1 Marshmallow Defining
4 ပို၍ ကြီးသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုံခြုံရေး
5 Nexus ကိုပထမ ဦး ဆုံး, ထို့နောက်အခြားသူများ
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူကကျွန်တော်တို့ကို Android 6.0 အတွက် Marshmallow ကဲ့သို့သောနာမည်ဖြင့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆုံးမှာတော့ Lollipop ၏လွယ်ကူခြင်းအပြီး၌ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးချလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်ကြောင်းတစ် ဦး စပ်စုအချက်ကို Google က Marshmallow ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည် မှ ဒီဝဘ်.
ယခု ၆.၀ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး ၃ ခုရှိသည်။ ဥပမာယခုတွင်အသာပုတ်ပါ ပိုမိုမြင့်မားဘက်ထရီထိရောက်မှု ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာအားလုံးကိုလုံခြုံရေးနှင့်ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သူသည်ဤအင်္ဂါရပ်ကို Google I / O တွင်ထုတ်ဖော်ပြသသောအခါ၊ အသုံးပြုသူများအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကတ်များ မည်သည့် application မှတည်ရှိနေသောအခြေအနေတွင် Microsoft မှယောက်ျားများသည်အလွန်ဂရုပြုကြသည် Bing ယူလိုက်ပါကျနော်တို့မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဖြစ်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရှိပြီးသားရှိဆိပ်ကမ်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ Android M ၏တတိယအကြို preview ကို install လုပ်ခဲ့သည်အကယ်၍ သင်ဟာကံကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြိုးစားဖို့အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ သူမအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုလျှင်ရပ်တန့်ပါ ဒီ entry.
Android Marshmallow သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာသည် စွမ်းအင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ပိုကောင်းအသုံးပြုမှု စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုရရှိရန်နှင့်ကြာရှည်ခံရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်မှုနှစ်ခုရှိသည်။
Doze - သင့်ဖုန်းကိုအနားယူတဲ့အခါ Doze ကအလိုအလျောက်ထည့်ပေးသည် hibernation တစ်ပြည်နယ်၌တည်၏.
App standby: apps များ၏သက်ရောက်မှုကိုကန့်သတ် ဘက်ထရီသက်တမ်းအပေါ်။
အဲဒီနှစ်ခုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူတကွ သူတို့ကအေ့စ်တရံဖွဲ့စည်းသည် သင်၏စက်သည်ဘက်ထရီအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမရှိစေရန်၊ ယခင် Lollipop ဗားရှင်းသည်မလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်မည်သို့ပတ်သက်နေသည်ကိုလူတိုင်းကအလွန်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည်။
Marshmallow သည် apps များအားခွင့်ပြုချက်အချို့ကိုအမြဲတမ်းရယူရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် သင်မျှဝေချင်သောအရာကိုသတ်မှတ်ပါ ဘယ်တော့လဲ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောခွင့်ပြုချက်များကိုအချိန်မရွေးပိတ်ထားနိုင်သည်။
မနေ့ကဂူဂဲလ်အဖြစ်အပျက်မှာပြသခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးအကောင်းတစ်ခုမှာ Nexus 6P ၏နောက်ဖက်ရှိ fingerprint sensor ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးစာနယ်ဇင်းသည်မိုဘိုင်းကိုချက်ချင်းသော့ဖွင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ခွင့်ပြုသည် Android Pay ဖြင့်ငွေပေးချေပါ ခဲ disheveled အတူ။ Play Store မှတဆင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူသောအခါတွင်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။
Nexus ကိုပထမ ဦး ဆုံး, ထို့နောက်အခြားသူများ
လာမည့်အပတ် ငါတို့ရှိသမျှသည် Nexus ကိုရပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ကနေမနေ့ကပုံဖော်အဖြစ် ဒီ entry။ ကျွနု်ပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကျန်သောဆိပ်ကမ်းများသည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွင်းဆက်လက်တည်ရှိမည် ဒီကနေအခြား Android Marshmallow ၏ကောင်းကျိုးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်သူများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
Android update တစ်ခုဆိုပါစို့ ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing ထား၏ Lollipop ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ဂူဂဲလ်အနေဖြင့်လာမည့် Android ဗားရှင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းယခုအတည်ပြုရန်လအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Android 6.0 Marshmallow ၏ကောင်းကျိုးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
Magnum ၅၀၀ ဟုသူကပြောသည်
SD မှတ်ဉာဏ်ကိုဖုန်း၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်မပြောရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်ရသည်၊ အမှန်မှာ၊ မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမွမ်းမံချက်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်မဖတ်ပါ။ ဒီ function ကိုဆောင်တတ်၏။
ငါ LG-D855 ထဲကိုထည့်ပြီးပြီ၊ ငါကစမ်းသပ်နေတယ်။ ငါသိသမျှအကောင်းဆုံး O / OI သိသမျှအစဉ်အဆက်ကောင်းတယ်၊ အခုတော့ Marshmellow 6.0 က lollipop နဲ့စတင်နေပြီဆိုတာကအဖြစ်မှန်ပါ။ တိုးတက်လာဖို့အချိန်
Google Store တွင်ယူရို ၃၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သော Chromecast2နှင့် Chromecast Audio ရှိပြီးဖြစ်သည်